SomaliTalk.com » 2009 » October » 24
Home » Archive Maalinta October 24th, 2009
Cadaado: Nabadoon Cali Geeddi Afeey oo Geeriyooday
Allaha u naxariistee Caaqil Cali Geeddi Afeey oo ah Nabaddoon si wanaagsan looga yaqaan gobollada dhexe ayaa maalinadii Jimcadii 23-ka Oktoobar 2009, ku geeriyooday magaalo madaxda maamulka Ximan iyo Xeeb ee Cadaado. Caaqil Cali Geeddi ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa oday nabaddoon ah, oo waqtigiisa intiisa badan ku qaatay nabadaynta beelaha Soomaaliyeed ee wada dega gobollada dhexe. Bishii aanu...
Dowlad Diyaarad Saaran Dadkeediina Daafaha Muqdisho Duumo Kulaysay
Waa nasiib daro lasoo daristay umada somaliyeed, waxayna nasiib u heleen mudo 20 sano ah dagaalo soo noqnoqda, abaaro, cuduro, aan qaarkood la-aqoon qaarna laga dabar gooyey caalamka, hogaan aan arxan lahayn kanashaqeeya dantiisa iyo mida ehelkiisa iyo caalamka oo kusii ciqaaba dhibka ay kujiraan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan dadlkaan soo maray mudadii 10 ka sano ahayd ee udanabysay 3 Dowladood waxay...
(Soomaali badan ayaa waxay aaminsan yihiin in burburka ku dhacay Soomaaliya uu ku kooban yahay oo keliya Qaran amase haykalkii Dowladnimo,balse arimuhu intaa waa kabalaadhan yihiin,burburka dhacayna waa mid gun iyo baar ah). Sababihii keenay burburka:- Marka aad doonayso in aad sharaxdo amase qeexdo sababihii keenay burburka ku dhacay Soomaaliya ,waxaan qabaa in uu dhaafay xadkii sababo loo yeeli...